किताब गन्थन विथ ऋषि दाइ - | Kavyalaya - काव्यालय
किताब गन्थन विथ ऋषि दाइ
by राज कुमार भदौ २८, २०७६
१) C.A. पढ्दै, पत्रकारिता गर्दागर्दै पुस्तक बजारमा आउने सोच कसरी बन्न गयो ?
⇒ यात्रा चाहीँ कहाँ पग्छु, कुन विन्दुमा पुग्छु भन्ने कुराले भन्दा पनि समय सापेक्ष रुपको माग हुन्छन् । १२ पास गरेपछि C.A. पढ्ने हुटहुटी थियो मनमा, C.A. ले साइन गर्ने बित्तिकै लाखौँ पैसा कमाइन्छ भन्ने मानसिकता पनि थियो त्यो समय । नेपाली विद्यार्थीहरुले भोगेका कुराहरु, नयाँ आएका विद्यार्थीहरुका लागि चुनौतिका कुराहरु, पढेर उदाहरणीय काम गरेका व्यक्तिका कुराहरु, यो सबै नेपालसम्म आइपुग्नु पर्छ भन्ने हिसाबले पत्रकारिता सुरु गरेको थिएँ । बाल्यकाल देखि नै सिकेका कुराहरु, बुवाले सामाजिक कार्य गरिरहनुहुँदा नजिकबाट नियालेका कुराहरुले पनि हरेक दिन डोर्यायो । दिल्लीमा बसेर पढिरहँदा त्यहाँ इ-कमर्स बिजनेस एकदमै फस्टाउँदो थियो र म आफुचाहीँ साहित्य प्रेमी भएको कारणले आफ्नै देशमा साहित्य र इ-कमर्सलाई संयुक्त रुपमा किन नलैजाने भन्ने सोच त्यताबाट आएको हो । व्यापार-व्यवसाय भनेको आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साधन हो भने समाजप्रति गरिने उत्तरदायित्वहरु भने छाड्नु हुँदैन भन्ने कुराले पनि मलाई यहाँसम्म ल्यायो ।
२) स्वदेशी, विदेशी कस्ता पुस्तक सजिलै बिक्री हुन्छन्? ?
⇒ मलाई चाहिँ स्वदेशी, विदेशी, फिक्सन, नन-फिक्सन भन्ने कुराले फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन । “किताबमा कन्टेन्ट के छ, किताबको पात्रसँगको कनेक्टिभिटी कस्तो हुन्छ पाठकमा” जस्तो कुरा चित्तबुझ्दो छ भने, जुन पनि विधा/भाषाका किताबहरु राम्रै बिक्री हुन्छन् ।
३) पुस्तक बेच्ने मान्छे, आफु पनि भयङ्कर पढ्नुहुन्छ होला है ?
⇒ म त्यस्तो दिनमै पुस्तक पढेर भ्याउने, खत्रा पढ्ने त हैन । पुस्तक पढ्न रुचाउँछु । हामीले स्कुल पढ्ने समयमा पाठ्यक्रम कै पुस्तकहरु पनि अभाव हुन्थे भने बजारमा बोर्डर पारीबाट आएका यौनका किताबहरु बिगबिगी पाइन्थ्यो, स्टेसनरी जानै अप्ठेरो पर्ने गरी । पाठ्यक्रमका पुस्तकहरु चाहीँ अन्तै सुगम ठाउँ पुगेर केही पुस्तक ल्याएर पढ्थ्यौँ, साहित्यका भने पढ्न रहर लाग्दा पनि एकदम कमै पाइन्थ्यो । हरेक दिन केही न केही एक पन्ना भएपनि पढ्ने चाहिँ गर्छु ।
४) त्यसोभए लेख्नुपनि त हुन्छ होला ?
⇒ मेरो लेखनको सुरुवात दैनिकीबाट भएको हो । हिजोका दिनमा डायरीमा लेखेँ भने अहिले नोट एप्स् छन् । सानोसानो कुराहरुले पनि प्रभाव पारेका बेला केहि लेख्छु, देखाउन भन्दा पनि आफ्नै लागि लेख्छु । हिजोका दिनहरुमा पत्रकारिता गर्दा पनि धेरै सामाजिक कथा/लेखहरू लेखेँ। लेख्न रुचाउँछु, बिस्तारै सिक्दैछु ।
५) अनि सिनेमा कत्तिको हेर्नु हुन्छ ?
⇒ पहिले पहिले भयङ्कर हेर्थेँ । हाम्रो पाला हलमा फिल्म लाग्दा रिक्सामा पोस्टर टाँसेर गित बजाउँदै गाउँ-गाउँ बजाउँदै प्रचार गर्थे । त्यतिबेला विणा चलचित्र मन्दिर भन्ने हल थियो । कुनै पनि नछुटाई हेरिन्थो । कुनै दोहोर्याएर । दर्पणछायाँ मैले हलमै गएर १७/१८ पटक भन्दा धेरै हेरेँ । आजकल भने हेर्न कम भएको छ । व्यस्तता अनि समय नमिलेर पनि हो कम भएको चाहिँ ।
६) कस्तो खालको बढि हेर्नुहुन्छ ?
⇒ ठ्याक्कै यस्तै भन्ने वर्ग त छैन । कुनै मोटिभेसनको लागि हेर्छु, कुनै इन्टरटेनमेन्टको लागि पनि हेर्छु । सबै खालको हेर्छु । सिक्ने कुरा हरेक सिनेमामा हुन्छन् ।
७) मन पर्ने लेखक र कृति ?
⇒ बा ले पढ्ने गरेको महाभारत सुनेर त्यहाँको पात्रबाट/स्लोकबाट नजिक भएको हुँ । हरेक पुस्तकबाट केहि न केहि लिन पाउँछु । यो लेखक मेरो लागि राम्रो, यो कृति चाहिँ खत्रा भन्दा पनि म सबै पढ्न रुचाउँछु ।
८) पुस्तक आयातमा कर वृद्धि भएको छ, यसको असर कस्तो छ पुस्तक बजारमा ?
⇒ किताब भन्ने बित्तिकै साहित्यिक मात्र छैनन् । पाठ्यक्रमका पुस्तकदेखि शब्दकोशसम्म पर्छन् । विद्यार्थीका लागि पनि बाधा पुगेको अवस्था सृजना छ । त्यसका साथसाथै पाठकहरु पनि साहित्यिक किताब पढ्न बाट वञ्चित भइरहेका छन् । धेर-थोर असर भने परेकै हो । सरकारी निकायले पनि कर मात्र नभनि यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने हो ।
९) किताब बेच्न मज्जा कि पढ्न ?
⇒ “किताब पढ्न मज्जा!” भन्छन् मान्छेहरू, तर बेच्न मज्जा । किन भन्दा पढ्दा म एक्लैले पढ्छु, एक्लैले बुझ्छु । तर जब किताब बेचेर हजारौँ मान्छेहरुको हातमा पुग्दा मान्छेहरुले सिक्न/जान्न पाउँछन्, तब चाहिँ बडो आनन्द लाग्छ । त्यो सँगै व्यावसायिक पाटो त छँदै छ।
१०) कविताका किताबहरु त्यति बिक्दैनन् भन्ने गरिन्छ, यो कुरा कति सत्य हो ?
⇒ तुलनात्मक हिसाबले कविताका किताबहरु कम बिक्री भएको भन्ने कुराहरु चाहिँ हो । तर पछिल्लो समयमा कविताले जुन ट्रेन्ड सेट गर्दै गएको छ त्यो भने एकदम राम्रो छ । कवितामा वा अरु जुन सुकै विधामा भित्र कन्टेन्ट के छ भन्ने कुराले नै फरक पार्छ र अहिले त पहुँच सबैतिर भएकाले यसको बजार पनि फैलँदो छ ।
११) पढ्नै पर्ने जस्तो लागेको किताब ?
⇒ किताब त सबै पढ्नु पर्छ, समयले भ्याएसम्म । ज्ञान भन्ने कुरा हरेक किताबबाट लिन सकिन्छ ।
१२) पुरस्कार तथा अवार्डले पुस्तक बिक्रीमा कतिको मदत गर्छ ?
⇒ पक्कै पनि ठुलै मदत गर्छ त्यसले । काम गरिरहेका व्यक्तिलाई हरेक दिन काम गर्दा नयाँ-नयाँ चुनौती आउँदा थप ऊर्जा दिने काम गर्छ । पहिचान र थप बजार विस्तारमा पनि एकदमै ठुलो टेवा पुर्याउँछ । र यसले हिजोको दिन भन्दा आजको दिनमा अझै राम्रो बनाउँदै लैजान एउटा चुनौती पनि थपिदिन्छ ।